China azu paaki T-B3905 rụpụta na Factory | TIGERNU
TIGERNU expandable nnukwu ikike njem akpa paaki
Ikike: The njem azu paaki nwere abụọ nha, otu size bụ 30 15 * 45cm, dabara ruo 15,6 ″ laptọọpụ na otu size bụ 30 * 19 * 50cm nke bụ ịgbasa, dabara ruo 19inch laptọọpụ. Agbatị ikike 19inch. azu paaki bụ 23L ka 38L. Ngalaba a haziri ahazi na otutu oghere zuru oke maka njem ma obu njem. Enwere ngalaba laptọọpụ dị iche iche dị iche iche Nke nwere ngalaba buru ibu, zuru oke maka obere njem na njem ezumike na njem njem.
Wuru na USB & Earphone Ports: Mpụga USB na-akwụ ụgwọ ọdụ ụgbọ mmiri nwere ike iwepu 4.0 ngwa ngwa ngwa ngwa na-enye mma ka ị na-akwụ ụgwọ ekwentị gị na ngwaọrụ eletrọnịkị ndị ọzọ. Oghere maka isi okwu n'èzí na-enye ohere dị mfe iji ojiji ntị
Humanized Design: Ala ergonomic imewe padded ubu eriri na ventilashion padded azụ nwere ike belata ubu erughị ala. Eriri akpa nwere ike idozi akpaazụ na ngwongwo akpa maka njem dị mfe.
Ihe: Ejiri akwa oxford na-eguzogide mmiri na akwa polyester dị elu maka ịdịgide adịgide. Ihe eji emechi ihe eji emechi ihe eji eme abuo abuo nke nkpuchi nke ime ulo na-enye ohere di mfe ma nwekwuo nchekwa
Akpa azụ a bụ nhọrọ dị mma, nke kwesịrị ekwesị maka ndụ kọleji, njem njem na omume ndị ọzọ. Nye onyinye maka ndị gara ụlọ akwụkwọ, njem ma ọ bụ ọrụ
Nọmba nlereanya T-B3905
Agba: Oji; Agba ntụ
Nha: 45 * 30 * 15cm dị
Ihe: Splashproof & ọkọ na-eguzogide ọgwụ 300D Oxford
Njirimara: Ihe ntanetị; Na USB Nchaji;
RFID n'akpa uwe
Nke gara aga: Paaki T-B3668
Osote: Paaki T-B3906